May Nyane: မွေးတဲ့နေ့
လွန်ခဲ့တဲ့ လေးဆယ့်နှစ်နှစ်တုန်းက.. အဲဒီညမှာ
လပြည့်နေ့မို့ လမင်းကလဲ ပြည့်ပြည့်၀၀ကြီးသာနေတာတဲ့။
ပြီးတော့ နယုန်လမို့ အဲဒီညမှာ မိုးကလဲ ရွာနေသေးတာတဲ့။
အဲဒီလိုညမျိုးမှာ အမေက ဂန္ဓီဆေးရုံကြီးရဲ့ ကော်ရစ်ဒါမှာ
အင်္ဂုလိမာလသုတ် မေတ္တာသုတ် ခန္ဓသုတ်တွေရွတ်လိုက်နဲ့
သားဦးဖြစ်ပြီး ကလေးက ထွားလို့တဲ့..
ဆက်တိုက်ဗိုက်နာနေတာ ၅နာရီလောက်ကြာပြီးမှ အဲဒီ လပြည့်ညမှာ
ကျမကို မွေးခဲ့ပါတယ်။(အရပ် ၅ပေပဲရှိတဲ့ အမေ့ခမျာ
၈ပေါင်ကျော်ရှိတဲ့ သားဦးကျမကို တော်တော်ပင်ပန်းပြီးမှ
မွေးခဲ့ရကြောင်းကို ကျမကိုယ်တိုင် ၈ပေါင်ခွဲရှိတဲ့ သားကြီးကိုမွေးရမှပဲ
နယုန်လပြည့်ညရဲ့ မိုးအေးအေးထဲမွေးပြီး..တနင်္လာနေ့လဲ ဖြစ်လို့
ငြိမ်း ဆိုတာပါအောင်ပေးမယ်လို့ စဉ်းစားနေခဲ့တာတဲ့။
အမေ မွေးခန်းထဲ နာကျင်ပင်ပန်းနေချိန်မှာ..
အဖေကတော့ ကော်ရစ်ဒါမှာ စိတ်တပူပူပေါ့။
နောက်တော့ မွေးခန်းမှာ သူနာပြုတွေ ၀င်ချည်ထွက်ချည်..
အဲဒီမြင်ကွင်းတွေ မြင်နေရတဲ့အဖေ့မှာ ..နေလို့ထိုင်လို့မရ။
ခဏကြာလို့ မွေးခန်းထဲက ကလေးငိုသံကြားလိုက်ရတဲ့အထိတောင်
အမေအတွက်ပူစိတ်နဲ့ စိတ်က ဒုန်းဒုန်းမကျသေးဘူးတဲ့။
နောက်မှ.. ကျမနဲ့ အမေ့ကို တွေ့ရမှ..ရယ်နိုင်ပြုံးနိုင်သတဲ့။
ဒါတောင်.. ကျမက ညှပ်ဆွဲ(Forceps)မွေးမို့ ဥာဏ်မကောင်းမှာကို
ပူနေခဲ့သေးတာတဲ့။နောက်တော့ အဖေက အမေ့ကို ..
ဒီလောက်မွေးရခက်တဲ့ကောင်ကို တနင်္လာသမီးလဲ ဖြစ်တော့
ခက် လို့ နာမည်ပေးမယ်ကွာလို့ ပြောသတဲ့။
အမေက..အာ.. မလုပ်ပါနဲ့..ငါ့သမီးဘ၀မှာ ခက်နေပါမယ်တဲ့။
တကယ်တော့ အဲဒီတုန်းက ခက်ဆိုတဲ့နာမည်ကို
ခေတ်မီတယ်ထင်ပြီး အဖေက ကြိုက်ကို နေတာတဲ့။
ဒါနဲ့ ခက်လို့ပဲ နာမည်ပေးဖို့ အမေ့ကို အရအမိပြောတာတဲ့။
အမေကလဲ ငြိမ်းမှ ငြိမ်း..
အဖေကလဲ ခက် မှ ခက်။
ကျမနာမည်ကို ငြိမ်းခက်ခက် လို့ အတည်ပြုလိုက်တော့တာ။
(နောက်တော့ ငြိမ်းဖို့ခက်ရတဲ့အထဲ ထိန်းဖို့လဲခက်တဲ့
အဖေနဲ့ အမေ ဒုက္ခခံမွေးခဲ့ရတာ.. တသက်လုံး…)
လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀နှစ်တုန်းက အမေ၊ကျမနဲ့ အဖေ..
အဓိပ္ပါယ်ရနေတယ်လို့ ထင်တာမို့ (တကယ်လဲ ငြိမ်းဖို့ခက်ခဲ့)
ငယ်ငယ်ကတည်းက စာအုပ်တွေမှာ နာမည်ထိုးတိုင်း
Peace is not easy to get.
But I conquer…
လို့ ကလေးအတွေးနဲ့ ကိုယ့်ဘာသာ ရေးရေးထားခဲ့တာ။
I conquer….. ဆိုတာကိုလဲ သဘောကျတာကိုး။
နာမည်အရင်းက မာရေကျောရေနိုင်တယ်လို့ ထင်တာနဲ့ပဲ
နည်းနည်းများနူးညံ့သွားမလားလို့ မေငြိမ်းလို့ ရွေးခဲ့တာ..။
မထင်မှတ်ဘဲ အတည်ဖြစ်သွားရာက မေငြိမ်းကိုတော့
၁၉၈၆ မှာ မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။
အင်း…လွန်ခဲ့တဲ့ ၇၉နှစ်..၁၉၂၈ခုနှစ်ရဲ့ ဒီနေ့လို ဇွန်၁၄မှာတော့
ချီ ( Che Guevara)ကို အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံမှာ မွေးခဲ့တယ်။
အဲဒီနောက် ၁၈နှစ်အကြာ.. ၁၉၄၆ခုနှစ်ရဲ့ ဇွန်၁၄ကျတော့
Donald Trump ကို အမေရိကမှာ မွေးခဲ့တယ်။
၁၉၆၉ ခုနှစ်ရဲ့ ဇွန်၁၄မှာတော့
Steffi Graf ကို ဂျာမနီမှာ မွေးခဲ့တယ်။
ဒီလူတွေကတော့ နယ်ပယ်တခုမှာ အထင်ကရဖြစ်သူတွေပေါ့။
အင်တာနက်က မှတ်တမ်းတင်ရတဲ့ အကျော်အမော်တွေ။
ဒါဖြင့် ဇွန်၁၄ဖွားတွေထဲမှာ အဆိုးတွေ အဖျင်းတွေရော
မပါဘူးတဲ့လား… ပါမှာပေါ့။ဒါပေမဲ့ လောက သဘာဝအတိုင်း
အကောင်း အမွန်ကိုသာ မှတ်တမ်းတင်လိုပေလိမ့်မယ်။
လောကထဲ အသုံးဝင်အောင် အသုံးကျအောင်နေရင်းက
ကိုယ့်ဝန်းကျင်က ကိုယ့်ကိုလိုအပ်နေအောင် အသုံးကျနေရင်
အဖေနဲ့ အမေ့ခမျာလဲ မွေးရကျိုးနပ်ရှာမယ်..
ပြီးခဲ့တဲ့ ၆နှစ်၊ အဖေဆုံးပါးတဲ့အချိန်ထိ..
ကျမ မေငြိမ်းဖြစ်လာတာပဲရှိပါတယ်။အဖေက ကျမ တက္ကသိုလ်မှာ
ဆရာမဖြစ်တာထက် မေငြိမ်းဖြစ်လာတာကို ကျေနပ်သူ..
ဒါကတော့ ကျမဘ၀မှာ ဖြေသာစရာ။)
ကျမ မိဘအပေါ် ဘယ်လောက်မှ ကျေးဇူးမသိရသေး။
(ကိုယ့်ဘ၀ကတောင် ခုချိန်ထိ ဘာတခုမှ သေချာတာမရှိသေးတာမို့
နောက် ဆိုတာကလဲ ဘယ်လောက်မှ မသေချာ..)
(ပြီးတော့ တိတ်တိတ်ကလေး မျက်ရည်ကျရင်း)
ဆုတောင်းပေးနေမှာကတော့ .. သေချာလှပါတယ်။
ကျမမှာကတော့ အမေ့ကျေးဇူးတွေအတွက် ပြန်ပေးစရာ…….
ရှားပါး ဓါတ်ပုံလေးပဲ။ ဘလော့ဂ်မှာလည်း ဓါတ်ပုံတွေတောင် တင်လို့်ရနေပြီ။ အားပေးနေပါတယ်ဗျာ။
သင်ကြားပြသပေးတဲ့ ဆရာမ တယောက်လို…
ချစ်ရပါသော ဆရာမ မေငြိမ်းရဲ့ မွေးနေ့မှသည် နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင် ပျော်ရွှင်သော မိသားစု ဘ၀လေးနဲ့ အတူ လိုအင်ဆန္ဒဟူသမျှ ပြည့်ဝရပါစေ…။
ဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေ … လို့
ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ် … အမရေ … ။
ပျော်ရွှင်ဖွယ်မွှေးနေ့ပါဆရာမ တိုင်းပြည်အကျိုး ပိုမိုသယ်ပိုးနိုင်ပြီး ကျန်းမာ. ချမ်းသာ. ၀မ်းသာ. ဘေးကင်း နဲ့ အောင်မြင်ခြင်းတွေ ရနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးခဲ့ပါတယ်..
မင်္ဂလာရှိသော မွေးနေ့ပါ ဆရာမရေ.. သက်ရှည်ကျန်းမာစွာဖြင့် ချစ်သူများနှင့် မခွဲမခွာနေရကာ ကောင်းသော လိုရာဆန္ဒတွေနဲ့ ပြည့်ဝပါစေလို့။
ဟက်ပီ ဘက်ဒေးပါ ဆရာမ
နောင် နှစ်ပေါင်းများစွာ စာတွေ ဆက်ရေးနိုင်ပါစေခင်ဗျာ
နောက်ထပ်နောက်ထပ်မွေးနေ့တွေမှာ ဆရာမနဲ့တူတူ မြန်မာပြည်မှာ ကျင်းပနိုင်ပါရစေလို့ ဆုတောင်းမိပါတယ်။
ချိုကိုတို့ရဲ့ အိမ်ကြီးမှာလေ။ မိသားစုအကုန်နဲ့။ ဆရာမ ဘယ်လိုသဘောရလဲ။ ပျော်ဖို့အရမ်းကောင်းမှာနော်။
ယုံကြည်တဲ့၊ ရည်မှန်းတဲ့လမ်းအတိုင်း အောင်မြင်စွာ
ချစ်ခင်ရသော မိသားစုနဲ့အတူ လျှောက်လှမ်းနိုင်ပါစေရှင်။
မေငြိမ်း..တဲ့.. ဂျူးပြီးတော့ နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့လူငယ်ပရိသတ် ကို ရသွားခဲ့တဲ့ အစ်မ ရဲ့ ပထမဆုံး လုံးချင်း ကိုစဖတ်ရ ကထဲ က မေငြိမ်း ဆိုတဲ့ရိုးပြီး ခေတ်ဆန်တဲ့ ကလောင်နာမယ် နဲ့လူငယ်ကိုယ်စားပြု ရေးဟန် က ပရိသတ်အတွက် မှတ်ရလွယ်ကူစွာ တင်ကျန်ခဲ့ ပါတယ်။
May your dream come true… May peace be with you..လို့ပြောကြသလို May ဆိုတာ ဆုမွန်ကောင်းတွေ အတွက်လဲ ကိုယ်စားပြုနေသလို ပါပဲ။ ငြိမ်း က ငြိမ်းချမ်းရေး၊ အင်္ဂလိပ် မြန်မာ အနက်တွေ ပေါင်းလိုက်တော့ ငြိမ်းချမ်း ပါစေ ဆို တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးဆုမွန် တောင်းပေးမယ့် မြန်မာအမျိုးသမီးစာရေးဆရာမတစ်ဦး ပေါ့…
အစ်မ မွေးနေ့ ဒီနေ့ မှ စပြီး ပျော်ရွှင်ရပါစေ..
Happy Birth Day (Sayama)May Nyein..
(မေငြိမ်း လို့ အစ်မ နာမယ် အတိုင်းရေးလိုက်တာ မရိုသေလို့ မဟုတ်ပါ။တစ်ချို့အနူပညာသမားတွေ က နာမည်ရှေ့မှာ ဦး၊ဒေါ်တပ်ခေါ် ရင် တမျိုးကြီး ဖြစ်ပြီး မကြိုက်တတ်ပါ။ ဥပမာ ကာတွန်း ဦးငွေကြည် က ကာတွန်း ငွေကြည် ပဲ ရေး တာကြိုက် တယ်လို့ ရေးဖူးပါတယ်။ဒေါ်မေငြိမ်းလို့ ရေးရတာထောက်လို့အစ်မရဲ့အနူပညာကလောင်နာမယ် အတိုင်း ရေးလိုက်တာပါ။အပြင်မှာတော့ အစ်မ၊ ဆရာမ မေငြိမ်း ပေါ့နော)
ဒေါ်-မ တပ်ရတာ တခါတလေတမျိုးဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ကျမဆီမှာ အဲဒီအတွက် ပြဿနာမရှိပါ။
ဆရာမ မွေးနေ့မှာပျော်ရွှင်ပါစေ၊ စိတ်သွားတိုင်းကိုယ်ပါ လိုရာဆုနဲ့ပြည့်စုံပါစေ၊ နှစ်ပေါင်းတစ်ရာကျော် အသက်ရှည်ပြီး စာများများရေးနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်